Myanma News » တုတ်ကိုလဲ မကြောက် မုန့်ကိုလည်း မကောက် Fighting Peacock	25
ကထူးဆန်း says: ………. ဟတ်ချိုး ဟတ်ချိုး
Ko chogyi says: ကျောင်းသားဆိုတာ ကျောင်းသားအတွေးပဲ ရှိတာပေါ့လေ
black chaw says: ဒီကိစ္စဟာ တကယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး…။
ခင်ဇော် says: စိတ်လျှော့လိုက်ပါပြီ။
Wow says: လူထုမပါဘူးဆိုပီး လူထုပဲထိုင် အပြစ်ပျောနေလို့မရဘူးလေ ကြောင်ကြောင်
ဗိုလ်ချုပ်တို့တုံးကလဲ အလိုတော်ရိတွေ သစ်စာဖောက်တွေရှိတာပဲလေ… ရှိတဲ့လူကပဲ အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာ လူများဂျီးမလိုပါဝူး ကြောင်တပ်ဖွဲ့ကို အူးစီးပီး လွှတ်တော်မှာ အသေခံ ဗုံးခွဲပလိုက်…. ဟိုဘက်က သိုင်းသမားဒွေလဲ ကြောင်ဏှာကြီးကို သတ်ဖို့ချောင်းနေတဲ့အတူတူ မထူးပါဘူး သေပစ်လိုက်တာအေးဒယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: မိဘဆရာသမားတို့၏ရင်ခွင်သို့ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ခိုဝင်ကြ..။
မြစပဲရိုး says: ဘယ် ဘုန်းကြီး ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘုန်းကြီး တွေ ဒီ အရေးမှာကြားမဝင်တာ အကောင်းဆုံး ပါဘဲ။
မြစပဲရိုး says: ဟော လာပြီဟေ့
Peacock က ဘယ် Peacock လဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: အနာခံ အသေခံကာ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းကြ..။
မြစပဲရိုး says: ဝီဝီ ရယ် ဝီဝီ ရဲ့။
Alinsett@Maung Thura says: အမေ့အတွက်လည်း အချိန် သိပ်မရှိတော့
kai says: အသိမမှားရင်.. ဒေါ်စုက.. ဒီ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့.. သမ္မတမလုပ်တော့ပါဘူးလို့.. စစ်တပ်ကိုဝန်ခံထားပြီးဖြစ်မယ်..။
Alinsett@Maung Thura says: တီဗွီကနေ လွှင့်ပြနေတဲ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေ ကြည့်ပြီး ကျနော် ဘာတွေးမိလဲ ဆိုတော့…
ဘာလို့လဲ…သိလား… တင်ပြလာတဲ့ ဥပဒေတွေ/တိုင်းရေးပြည်ရာ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်း အတည်ပြုဖို့ .နောက်ဆုံး မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါ.. (ကျနော် ယူဆတဲ့) တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းလာဖို့ ဖြစ်သင့်တယ်..ဖြစ်စေချင်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ ကိစ္စတော်တော်များများမှာ…
တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုဘက်မှာ ရှိမနေတဲ့ ကိစ္စတွေကျတော့ … ထောက်ခံမဲတွေ များနေသလားလို့…တွေးမိလို့… ဥာဏ်နဲ့ ယှဉ်နိုင်စွမ်းသော…
သမာသမတ်ကျသော…. လိုတာ လိုတာ..ပြောပါတယ်.. ဆိုတော့….အမေ… ကိုယ်ပွါး ၁၀၀ လောက် ခွဲပြီး..လွှတ်တော်ထဲ ရှိနေစေချင်လိုက်တာ..လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: အဲဒါကိုရင်တို့လို.. လူထုကရွေးရမှာလေ…
အဲဒီအပိုင်းကျ.. ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် စီမံမတတ်ဖြစ်နေတယ်လို့.. ထင်..။ Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: ကျနော်တို့လို လူထုကြီးက ရွေးချယ်မှုလုပ်ရမယ့်အပိုင်း ရှိတယ်
စနစ်တကျ မှားယွင်းလာပြီးသား စာမျက်နှာတွေပါဆို Was this answer helpful?LikeDislike 13
tun swe says: ဟုတ်​တယ်​ကိုအလင်းဆက်​​ပြော သလိုပါပဲ အ​မေစု က အသက်​ကြီးပြီ
မီ မီ says: ဦးကြောင်ကြီးရှင့်
naywoon ni says: ဦး​ကြောင်​ဂျီးကို ပြန်​​ခေါ်လို့မရဘူးဗျ ။ သူက ၈၈ အ​ရေး​တော်​ပုံမှာ အဒိက ​ခေါင်း​ဆောင်​ ။ သူပျံလာရင်​ ​လေယာဉ်​​ပေါ်က​တောင်​ အဆင်းခံမှာ မဟုတ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: southယူးမကလဲ စစ်ခွေးဟောင်တိုင်း လိုက်ယောင်နေပြန်ပြီ…။ နင်တို့လို ဆင်ခြင်ညဏ်မရှိ သူများပြောတိုင်းယုံတဲ့ဟာမျိုးကို ရွံတယ်..။ ကျော်ကိုကို တပ်ဦးကို ပြေးထွက်သွားတဲ့ဓာတ်ပုံလင့်ခ် ရှာမတွေ့လို့ စာပဲထည့်လိုက်တာ..။
Wow says: ကျော်ကိုကိုက ဟင်္သတက ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ကျောင်းနေဖက် M.Com လို့ပြောတယ်…
Ko chogyi says: သူခိုးက ခိုးတယ်လို့ ၀န်ခံဖူးလို့လား
မြစပဲရိုး says: ကိုမောင်မောင်ရွှေကြောင်
မီ မီ says: အပြောကတော့ဟစ်တလာပြန်ရှင်လားသလားထင်ရတယ်
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဘွား​တော်​ယီးဂို ဆန့်​ကျင်​ဂျ
pooch says: ဥာဏ်ချင်း ယှဉ်ပြီး ကစားမှ ပွဲက လှမှာလို့
သာမာန်ပြည်သူ ကလေးတယောက် လူတယောက်ကို လူပီပီသသ တွေးခေါ်နိုင်လောက်တဲ့ ပညာရေးအခြေခံ ထည့်မပေးလိုက်နိုင်တာ အသိသာကြီး ပြောင်းတာကတော့ ပြောင်းရမှာပဲ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်က အောက်ကို ဘက်ပေါင်းစုံက ထိုးဆင်းနေပြီ
ရေခံမြေခံက သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဥပမာ တခု ပြောရရင် ဆရာတပည့်အပြန်အလှန် စောင့်ကြည့်အမှတ်ပေးတဲ့စနစ်က ဟိုက စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ ရှိတယ်
ကျောင်းခန်းတွင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အဆိုးမြင်တာလား အကောင်းမြင်တတ်တာလား အမှိုက်ကို စနစ်တကျ ပစ်တတ်ရဲ့လား စတဲ့ အသေးစိတ်က စပြီး စောင့်ကြည့် အမှတ်ပေးတာ
စည်းမျဉ်းတွေ ရှိပြီးသား စနစ်တကျလုပ်ရတာ တနှစ်လုံးစာ ကျောင်းသားရော ဆရာရော အကဲဖြတ်မှတ်တွေကို ထပ်ပြီး အကဲဖြတ်ရတဲ့ စောင့်ကြည့်လူကလည်း ရှိပြီးသား သူတို့ ပြောတိုင်း ယုံတာ မဟုတ်ဖူး အားလုံးက စနစ်တကျသွားတာ
ကျူရှင် ပြလို့ မရ ပြသာနာက ဆရာတွေကို အရင် တဆင့် မြှင့်ပြီးမှ ဒီစနစ်က အကောင်ထည်ဖော်လို့ရမှာ
ဆက်ပြောရင် ရိုင်းရာကျတော့မယ် မိခင် ဘာသာစကား အခြေပြုကို အမှန်တိုင်းပြောရရင် နားမလည်ဘူး ဘာကို ဆိုလိုချင်တာလဲ
ကြည့်စဉ်းစားကြပေါ့ ပြောင်းချင်တာတွေ ပြောင်းရဖို့ အကြမ်းဖက်မှ အနာခံမှ မဟုတ်ဖူး သူတို့လို အပျော့ဆွဲ လွှတ်တော်ထဲရောက်အောင်လုပ်ပြီး ရောက်ပြီးသားလူတွေကနေ တဆင့် ကိုယ်လိုတာကို ရအောင် လုပ်ယူရမှာ လွှတ်တော်ထဲ ကိုယ့်လူတွေ ရောက်အောင် သွင်းရမှာ လွှတ်တော်ထဲ မှ ငြင်းရင်း ခုံရင်း ခုံနဲ့ပဲ ပေါက်ပေါက် ဖိနပ်နဲ့ပဲ ပစ်ပစ် ။
ရောက်နေပြီးသားလူတွေ ကိုယ့်ဖက်ပါအောင် လုပ် အဲ့ဒါကြောင့် ကြောင်ကြီးလွှတ်တော်ထဲ ၀င်ပါ ဟိုက အာဏာရူး လက်မရွံ့တွေ အညွှန့်အဖူးတွေ အသေမခံနိုင်တော့ဘူး